8Yar (အိပ်ယာ): Batam ခရီးစဉ်
Posted by 8Yar at 11:14 am
ယာယာတို့ ကဟုတ်နေတယ်ပေါ့ ..ခရီးတွေဘာတွေတောင်သွားပီပီ
ပျော်စရာကြီး...နော်..... ပူးပူးလဲ သွားအုံးမယ် မိုက်တယ်...
ဘာမုန့်ဝယ်ခဲ့လဲ ဒါပဲ....... ပါလာတာအကုန်ထုတ်ပါ...
:) ခင်မင်တဲ့..... ပူးပူး
ကြည့်ချင်တာ အဲဒီပုံတွေမဟုတ်ဘူးလေ အိပ်ယာစုတ်ရဲ့း)
အိပ်ယာရေ နာတို့စုံတွဲသွားရင်လဲ လိုက်ပို့နော် သွားမယ်ဟယ်သွားဖြစ်အောင်ကို
မတားနဲ့ မဆွဲနဲ့ သွားမှာပဲ
အစ်ကို 8 yar က ကျောင်းသားလား။ မောင်မောင်လည်း ခရီးသွားရတာ အရမ်းကြိုက်တယ်။
ပျောက်တာပျောက်တာ... ဒီလောက်နဲ့တော့ ချော့လို့ ရရိုးလား.. No ပဲ ... မရဘူး... ထပ်ရေးဦး ဒါပဲ
ပုံတွေနဲ့ အလည်အပတ် ခရီးထွက်လိုက်တယ်ဗျို့... ပျော်ချာကြီး.. :)
အမှတ်တရ နေ့စွဲများ....<< ဟုတ်ကဲ့၊ သွားသာသွား အစ်ကိုရဲရေ။
puupuu<< ဟီး... မုန့်တော့မဝယ်ခဲ့မိဘူးဗျ။ စားတော့စားခဲ့တယ်။ :P ခစ်ခစ်။
မဒိုးကန်<< ဟင်! အစ်မဒိုး ကြည့်ချင်တာဘယ်ပုံလဲ။ ဟိုပုံလားဟင်? ဟင့်အင်း.. ဟိုပုံရိုက်ခဲ့ဘူး။ ဟိဟိ ရှက်လို့။ မုန့်ဆိုင်တွေမှာ အမြည်းလိုက်စားတဲ့ပုံကိုပြောတာနော်။ လျှောက်မတွေးနဲ့။ :P
Myanmar Online Music<< ဟုတ်ကဲ့ လာပါအုံးမယ်ခင်ဗျာ။ လာဖိတ်ခေါ်လို့ ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ။
jasmine(တောင်ကြီး)<< အစ်မ Jas ဟာ အို နေပါအုံး။ ဘယ်လိုမှတားမရတော့ဘူးလားဗျာ။ ဒါဆိုလည်းသွားဗျာ သားကို စပွန်ဆာလုပ်ပေးမယ်ဆို လိုက်ပို့မယ်ဂျာ နော်။ :P
9 January 2012 at 09:19
သမီးစံ<< အောင်ညလေး သမံစီးရယ် သွားချင်ရင်သွားတာသွား။ ငယ်တုန်းသွားရတာအေ့။ နောက်ပုံတွေကောင်းမကောင်းတော့ မသိဘူး။ မျက်စိနောက်အောင် တင်မှာတို့သေချာတယ်။ ဟီး...
မောင်မောင်<< ကျွန်တော် ကျောင်းသားမဟုတ်ပါဘူး အစ်ကိုမောင်မောင်ရေ။ အလုပ်လုပ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။ ခရီးသွားတာတော့ အားပေးတယ်ဗျာ။ သွားတာသွား။
ဘိုဖြူ<< လာအားပေးလို့ ကျေးဇူးပါ အစ်ကို ရေ။ အမှန်တော့ကျွန်တော်လည်း DSLR ကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် မသုံးတတ်သေးပါဘူးခင်ဗျာ။ ဝါသနာတူတော့ အားပေးတယ်ခင်ဗျာ။ ဖြေးဖြေးချင်းဆုပြီး ကြိုးစားကြည့်ပါနော်။ စိတ်လောမကြီးနဲ့ မှားမဝယ်မိဖို့က အရေးကြီးတယ် အစ်ကိုရေ။
Candy<<ဟင့် သူကလဲဇွတ်။ သူများက နေကောင်းပါဘူးချို။ အဲလေ.. မအားပါဘူးချို။ :P ဟီး နောက်တာ ထပ်ရေးပေးပါ့မယ်ဂျာ။ သမီးစံရဲ့ Tag Post. :)
Junemoe<< လည်လို့ကျေးဇူးဗျိုး။ ကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေဗျာ...
ကိုအိပ်ယာပြောတဲ့ ပိုလိုရှပ်ကို တော်တော်စိတ်ဝင်စားတယ် ဟဲဟဲ တစ်ချက်ခုတ် သုံးချက်ပြတ်ပဲ။
streetdeal တို့ တခြားဝက်ဆိုဒ်တွေကို သိတယ်...တော်တော်သက်သာတာလဲသိတယ်... ဒါပေမဲ့ သက်သာလွန်းတော့ Hidden cost တွေများရှိမလားဆိုတာရော... ဘယ်လိုဝယ်ရမယ်မှန်းမသိတာရောကြောင့် မ၀ယ်ဖြစ်တာ... ဘာတန်လိုမဟုတ်ပဲ ခပ်ဝေးဝေးနိုင်ငံတွေသွားရင်လဲ လေယာဉ်ခပါပြီးသားလား မပါသေးဘူးဆိုရင် ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဝယ်ရမှာလား သူတို့ဆီကပဲဝယ်ရမှာလား အဲဒါမျိုးတွေမသေချာဘူး... အီးမေးလ်ပို့တော့လဲမပြန် ဖုန်းဆက်တော့လဲ မကိုင်နဲ့... အဲဒိဝက်ဆိုဒ်တွေက ၀ယ်နည်းလေးတွေပြောပြပါအုံး....
နီကွန်ကင်မရာသုံးလို့ကောင်းလား... မဗေဒါကတော့ ကန်နွန်သုံးတယ်... အိပ်ယာလိုပဲ စစချင်း မသုံးတတ်တော့ပုံတွေက၀ါး... ၁နှစ်လောက်နေမှ နည်းနည်းသုံးတတ်လာတယ်... ဒါပေမဲ့ 8yar က ဓာတ်ပုံရိုက်အားကောင်းတော့ နောက်ဆိုရင်လက်ရည်တွေတက်လာမှာပါ...
ကင်မရာ အသစ်လေးနဲ့ ပုံလေးတွေက ကောင်းလိုက်တာ...။
အုံးသီးခွဲနေသူက 8yarများလားလို့ သေချာကြည့်ခဲ့တယ်...။
ကိုယ်မရောက်ဖူးတဲ့ နေရာတွေကို ရောက်ခွင့်ရလိုက်သလိုပါဘဲ..။
ကို8yar ရေ ဒီတစ်ခါ သွားရင် လက်တို့အုံးနော်
အဲ့ဒီမှာ အိမ်သာသွားတက်ချင် လို့..
ခရီးသွားရတာ စိတ်ချမ်းသာဘို့ကောင်းတယ် မောင်8Yar ရေ။
အခွင့်အခါများကြုံခဲ့ရင်ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်လေးထားချင်ပါဘိး)
12 January 2012 at 00:30
Nandar<< ဟုတ်ကဲ့။ စိတ်ဝင်စားမှန်းသိရင် ကျွန်တော်ဝယ်လာမိမှာပါ။ Nandarကအိမ်မှာ အငယ်ဆုံးဆိုရင် နောက်ဆုံးမှဝတ်ရမှာနော်။ ဟိဟိ..
mabaydar<<Hidden cost တော့ အပေါ်မှာကျွန်တော်ပြော သလို လောက်ပဲရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ခပ်ဝေးဝေးနိုင်ငံတွေဆိုတာ အနောက်နိုင်ငံတွေများလား မသိဘူး။ အနောက်နိုင်ငံတွေဆိုရင် မြန်မာပတ်စ်ပို့နဲ့ သိပ်အဆင်မပြေတတ်ပါဘူးလို့ ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ မဝယ်ခင် ဗီဇာ အရင်လျှောက်ကြည့် စေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ လေယာဉ်ခက ပါရင်ရေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ မရေးထားရင် package သီးသန့်ရောင်းတာမို့ လေယာဉ်လက်မှတ်က ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဝယ်ရမှာပါ။ အဲ့ဒီဆိုက်တွေက လက်မှတ်တွေမဝယ်ခင်မှာ Highlights နဲ့ Conditions ကို သေသေချာချာဖတ်စေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ သိပ်မရှင်းလို့ Email ပို့မေးတာ၊ ဖုံးဆက်မေးတာ ကောင်းတဲ့ အကျင့်လေးပါ။ Reply ပြန်မလာခဲ့ရင် အရဲစွန့်ပြီးတော့ မဝယ်ပါနဲ့ လို့ပြောပါရစေ။ Nikon D7000 လေးက အရမ်းသုံးလို့ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်က Auto ထက် Manual ရိုက်ရတာပိုကြိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဒါပေမယ့် မှာလောလောဆယ် Aperture ရယ်၊ Focus ရယ် ISO ရယ်လောက်ပဲ ချိန်တတ်ပါသေးတယ်။ အစ်မပြောသလိုပဲ တဖြည်းဖြည်းတော့ လက်ရည်တက်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ရတာပါပဲ။ Canon က Movie ရိုက်ရင် Nikon ထက်အများကြီးသာလို့ Canon ကိုလည်းကြိုက်ပါတယ်။ အစ်မက Canon ဘယ် Model ကိုသုံးနေတာလဲဟင်။
မြသွေးနီ<< ဟား ဟား ဟား အစ်မကတော့လုပ်ပြီ၊ အိပ်ယာက သူ့လောက်မလှမှန်းသိလျက်နဲ့ လူဆိုး။ ခစ်ခစ်။ လာအားပေးလို့ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ။
ဒုတ်ိယလူ<< ဗျာ!! ဘယ်မှာတုန်း အစ်ကိုဒုရဲ့ ဘုရားကျောင်းမှာတော့ မဟုတ်လောက်ပါဘူးနော်။ နောက်ပါနဲ့ဂျာ။ ငရဲကြီးကုန်ပါ့မယ်ဗျာ။
mstint<< ဟုတ်ကဲ့ အန်တီတင့် ရေ။ ကျွန်တော်လည်း ခရီးသွားရတာ အရမ်းကြိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ လာအားပေးလို့ အရမ်းအရမ်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ အန်တီတင့် လည်း ကျန်းမာချမ်းသာပါစေခင်ဗျာ။
8yar လောက်တော့ ကင်မရာနောက်ဆုံးပေါ်ကြီး မဟုတ်ပါဘူး... လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်လောက်က ၀ယ်ထားတာ... canon 400D ပါ.. ဗွီဒီယိုရိုက်လို့ရဘူး... ဗွီဒီယိုရိုက်ဖို့ ဗွီဒီယိုကင်မရာ HD တစ်လုံး ဟိုတစ်လောက ထပ်ဝယ်ဖြစ်တယ်...